Qeybtii 3-aad, Halkan kala soco qeybtii hore. Kulankan oo laba saacadood socday, Intaas oo keliya Cali lagalama hadlin, balse sarkaalka booliiska dharcadda ah ee ‘Chris’ waxa kale oo uu kala sheekaystay suurtagalnimada in mustaqbalka ay galaan heshiisyo buugaag kale oo uu qoro Cali iyo weliba in filim dhukumanteri ah ay ka sameeyaan qisada afduubkii Amanda Lindhout.
Arrintani waxa ay Amanda Lindhout ku ridday quus, ay gaadhay in ay afduubayaasha ka dalbato in ay dilaan. Laakliin Cali Cumar ayaa u sheegay in aanay dilayn. In kasta oo ay sheegtay in mar uu si hanjabaad ah ugu yidhi, “In aad dhimato diyaar ma u tahay?” haddana waxa ay sheegtay in uu u caddeeyey in aanu dilayn. Taas beddelkeedana waxa uu ku celcelin jiray in uu doonayo in uu guursado. La soco qaybta xigta…